Mourinho Oo Weerar Afka Ah Ku Qaaday Xidig Ka Tirsan Man Utd Kadib Guushii Crystal Palace %
Tababaraha Manchester United, ee Jose Mourinho, ayaa ah mid aanan ku farax-saneen qaabkii David De Gea, looga dhaliyay goolkii labaad ciyaartii Selhurst Park ka dhacay xalay oo Isniin ahayd taasoo uga soo badiyeen Crystal Palace 3-2.
Red Devils ayaa waxay kasoo laabatay ciyaarta oo 2-0 ahayd, iyadoona goolka guusha uu udhaliyay ciyaaryahankii hore ee Chelsea, Nemanja Matic ka hor inta aysan soo bareejeen goolasha kale Smalling iyo Lukaku.
Andros Townsend, ayaa goolka koowaad ka dhaliyay United, iyadoona Patrick van Aanholt uu 2-0 ka dhigay ciyaarta qeybteedii labaad, waxaana Mourinho uu aaminsan yahay in goolkaan uu si aanan fiicneen uwajahya De Gea.
Inkastoo, De Gea uu kubad halis ahayd ka beeniyay Christian Benteke, xili ciyaartu ay ahayd 2-2, laakiin Mourinho ayaa wuxuu yahay mid aanan ku farax-saneen qaabkii goolka labaad looga dhaliyay naadigiisa.
“David De Gea, waxay ahayd inuu si fiican uwajaho goolkii labaad,” ayuu macalinka reer Portugal, ee lagu magacaabo Jose Mourinho, usheegay warbaahinta kadib markii ay soo dhamatay ciyaartaan.
“Waa midka ugu fiican, taasina wax shaki ah igaagama ma jiro, laakiin waxay ahayd inuu si fiican uwajaho,” ayuu hadalkiisa kusoo koobay tababarihii hore ee kooxaha, Chelsea, Real Madrid iyo kuwa kale.
Guushaan ay gaartay United ayaa waxay utahay mid muhiim ah, maadaama ay hada soo galeyso kaalinta labaad, oo ay uga jirtay Liverpool, waxayna hada leedahay Red Devils 62 dhibcood, halka Reds ay leedahay 60 Buundo.